Markii Hore Mourinho, Haddana Carlo Ancelotti Oo Kooxaha Yurub Ugu Waa Wayn Soo Maamulay Oo Shaxda Kooxdiisa Ugu Fiican Soo Xushay. - Gool24.Net
Markii Hore Mourinho, Haddana Carlo Ancelotti Oo Kooxaha Yurub Ugu Waa Wayn Soo Maamulay Oo Shaxda Kooxdiisa Ugu Fiican Soo Xushay.
March 30, 2020 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Everton, Carlo Ancelotti ayaa soo xushay shaxda kooxdii ugu fiicnayd ee uu soo layliyey muddadii dheerayd ee uu tababaraha ahaa, iyadoo muddadii dheerayd ee uu tababaraha soo ahaa uu soo maamulay ciyaartooyo waaweyn oo dunida magac ku lahaa.
Ancelotti oo xirfaddiisa tababarenimo kasoo bilaabay waddanka Talyaaniga, waxa uu nasiib u yeeshay in uu macallin ka noqdo AC Milan iyo Juventus oo haystay ciyaartoyda ugu fiican caalamka, xilli horyaalka Talyaanigu ahaa kan ugu wanaagsan dunida.
Real Madrid ayaa sidoo kale uu soo layliyey, iyadoo sannadkii 2014 uu u qaaday Champions League ka hor intii aanu Bayern Munich tegin.
Chelsea ayaa uu kula guuleystay Premier League, waxaanu ka mid yahay tababareyaasha ugu guulaha badan ee ku jira taariikhda, iyadoo diiwaanka ay ugu jiraan laba rikoodh oo ah inuu ku guuleystay Premier League, Serie A, Ligue 1 iyo Bundesliga, halka uu Champions League kula guuleystay laba kooxood oo ka kala dhisan laba waddan oo kala ah AC Milan oo laba jeer ah iyo Real Madrid oo hal mar ah.
Carlo Ancelotti oo sidoo kale soo tababaray kooxaha Napoli, Parma, PSG iyo Everton oo uu hadda joogo, waxa shaxda kooxdiisa aanu kusoo darin ciyaartoyda Real Madrid ee ku guuleystay Champions League sannadkii 2014, sidoo kalena waxa aan boos ka helin ciyaartoyda Bayern Munich ee horyaalka Bundesliga uu la qaaday.
Toddoba ka mid ah ciyaartoyga uu soo xushay, waxa uu kasoo qaatay waqtigiisii Talyaaniga gaar ahaan saddexda kooxood ee Parma, AC Milan iyo Juventus, waxaana kaliya tarraxa PSG iyo Chelsea oo ah kooxaha kaliya ee shaxda Ancelotti ciyaartooyo ku yeeshay.
Ciyaartoyda uu soo xushay Ancelotti, waxa qiimayntooda uu ku salleeyey xilligii uu laylinayey, hase yeeshee waxa waqtiyo dambe ay wacdaro ka dhigeen kooxo kale xilli aanu Ancelotti joogin, taasina qiimayntan shaqo kuma laha.
Arinta shaxda Carlo Ancelotti ugu wayn ee la sheegi karaa waa in aanu soo qaadan hal ciyaartoy oo uu Real Madrid ku soo maamulay inkasta oo uu Cristiano Ronaldo marar badan ku sheegi jiray xidiga aduunka ugu fiican markii uu Madrid joogay inkasta oo uu kadib arintaas badalay.
Shaxda kooxda Uu Ancelotti Soo Xushay
Xulashada Ancelotti ayaa waxay timid inayr kaddib markii uu tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho uu soo doortay shaxda kooxdiisa ugu fiican, taas oo uu ka reebay ciyaaartoyda kooxda Manchester United iyo naadiga uu hadda layliyo ee Tottenham.
Haddii ay iska hor iman lahaayeen shaxaha kooxaha Jose Mourinho iyo Carlo Ancelotti soo xusheen kooxdee ayaa guulaysan lahayd? halkan kaga bogo shaxdii uu Mourinho soo xushay haddii aanad hore u arag.
Shaxda Kooxdii Uu Jose Mourinho